Indlu Yokuqashisa E-Shela, e-Ahmedabad
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Gujarat » Ahmedabad » Shela » Indlu Yokuqashisa E-Shela, e-Ahmedabad1
1 - 1 ka 29
Ubukhulu (Sq Ft): 2460
Inendawo eyakhelwe ngaphakathi engama-2460 sqft futhi iyatholakala ngokuqasha kuma-Rs. 30,000 ngenyanga. Inendawo yokuzivocavoca kanye nelift etholakalayo. Le phrojekthi inendawo yokudlala yamakilabhu nendawo yokudlala yezingane. Umnyango wayo omkhulu ubheke ohlangothini olusempumalanga. Le ndawo yokuhlala isilungele ukungena. Isikhathi ozosichitha lapha sizoba yisikhathi esikhulu kakhulu sempilo yakho esizokusiza futhi ukuba ukhululeke, uphumule uvuse umuzwa omkhulu wenjabulo. Umphakathi uxhunywe kahle izindlela ezahlukahlukene zokuhamba.